Oribi: Nchịkọta ahịa ahịa na-enweghị koodu na Azịza Need Kwesịrị Growzụlite Azụmaahịa Gị | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 9, 2020 Fraịde, Ọktọba 9, 2020 Douglas Karr
Mkpesa nke m gara n'ihu na-ekwusi ike na ụlọ ọrụ anyị bụ etu nchịkọta nchịkọta si dịkarịa ala. Nchịkọta bụ isi nbudata data, nyocha ajụjụ, yana ụfọdụ eserese mara mma n'etiti. Imirikiti ụlọ ọrụ na-agbapụta na akwụkwọ nyocha ha wee bụrụ na ha amaghị ihe ha na-ele ma ọ bụ omume ha kwesịrị ịdabere na data ahụ. Gwa eziokwu:
Nchịkọta bụ a Ajụjụ ajụjụ… Obughi onye Azịza Injin
Dị ka obere ihe atụ, enyere m onye ahịa aka nke na-emetụ aka, akụkọ na-akpaghị aka site n'aka ụlọ ọrụ ziri ezi na ha na-akwụ ọtụtụ puku dollar kwa ọnwa maka. Mgbe m gwuru miri emi na akụkọ ahụ, achọpụtara m na anaghị edebe akụkọ ndị ahụ na mpaghara mpaghara azụmahịa ahụ - ebe a machibidoro ha iwu.
Yabụ, chee na ọkara ndị ọbịa gị ga-ada ma gụọ webụsaịtị gị na ị gaghị azụ ahịa yana… na-atụda ibiaghachi gị na ọnụego aka gị… ma na-akpali gị ịme mkpebi na ọdịnaya ọdịnaya nke na-efu ụlọ ọrụ ahụ ọtụtụ narị puku dollar. Ozugbo anyị nyochachara data ha, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ metric ọ bụla gbanwere n'ụzọ dị egwu - na-enyere anyị aka imeziwanye ahịa ahịa dijitalụ ha nke ọma.
Ka ị na-eche maka njem nke ndị ọbịa, atụmanya, na ndị ahịa site na saịtị gị… ihe bụ ohere efu na -aghọtaghị nchịkọta na ịme mgbanwe mgbanwe dabere na omume nke atụmanya n'ezie ị ga-eleta?
Ọ bụ ezie na m bụ nnukwu geek ma hụ Google Analytics n'anya, ekwenyere m na ha emela nke ọma na ụlọ ọrụ anyị site na ịme a free ngwá ọrụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-akwa emo na echiche nke ịkwụ ụgwọ maka nyocha… n'agbanyeghị ịlafu nde kwuru nde site na enweghị ike itinye ya n'ọrụ n'ụzọ zuru ezu! Banye Oribi!
E nwere ihe ọzọ mmachi nke Google Analytics na anyị anaghị ekwu okwu banyere… na nke ahụ bụ na Google na Social Media nyiwe adịghị egwu nke ọma ọnụ. N'ezie, dị nnọọ iche, ha na-ajụ inyefe data n'etiti ibe ha. N'ihi nke a, ịnwa ịkọwapụta mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta na ịkọwapụta ọbịbịa gị na nkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe gị na ntụgharị siri ike.
Oribi: Nchịkọta Ahịa Azịza Injin!
Oriki awade ihe ịtụnanya ngwọta na codeless omume nsuso, actionable nghọta, smart funnels, omume mmekọrịta, otu esenowo njem, akụkọ omenala, zuru ahịa Attribution, ọwa arụmọrụ analysis, na ọtụtụ ndị ọzọ.
na Oriki, ndị ahịa agaghị etinye oge na nzacha na nyocha nyocha, ha nwere ike:
Mee ka ha gbanwee.
Wụpụta ọwa mmiri, mee omume nleta ndị ọbịa, nyochaa mgbanwe, yana ndị ọzọ na enweghị koodu chọrọ.
Nweta ọmarịcha akụkọ na nkeji oge.
Na-ebuli mgbasa ozi Google na Facebook ha.
Njem Nleta Ngwaahịa
Nke a bụ ihe zuru ezu ngwaahịa njem nke Oriki na ihe niile o nwere iji nye ndị na-ere ahịa na azụmaahịa ndị na-ele anya na ha ga-emejupụta mbọ niile ha na-agba n'ahịa dijitalụ - site na weebụsaịtị ha na ọwa mmekọrịta - iji bulie ndu ha na ntụgharị ha.
Na nlele, lee ụfọdụ atụmatụ na uru dị ịtụnanya nke Oribi:
Ndi oru - ewu funnels super mfe. Nzọụkwụ ọ bụla n'ime olulu gị nwere ike ịbụ ihe omume ọ bụla, pịa bọtịnụ, nleta ibe, ntinye akwụkwọ, ma ọ bụ mmemme omume. Nwere ike iyo ha site na iche iche parameters na ọbụna ike cross-ngalaba funnels mfe.
Mmeghari mmezi - Ọgụgụ blog gị ọ na - eme ka ọnụ ọgụgụ ntinye aka dị elu? Ndi obia ndi huru akwukwo onu ahia nwere ike igbanwe? Omume ahụ na-enyere gị aka ịchọta azịza ya.
Njem Ọbịa - Nke a na ngalaba bụ ndeksi nke gị ọbịa; jiri ya chọọ njem ndị na-atọ ụtọ yana usoro a kapịrị ọnụ. Ndabara sorting bụ Ikpeazụ Ahụla - ọbịa na n'elu ndepụta bụ ndị na-ugbu a na gị na saịtị ma ọ bụ ndị kasị nso-nso ọbịa.
ecommerce - Ọ bụrụ n’ị na-ere ntanetị na ntanetị, Oribi na-enye ụfọdụ akụkọ dị egwu nke akọwapụtara maka ịzụrụ zụọ na nkwalite gị.
WordPress na WooCommerce Plugins - Oribi ewepụtala ngwa mgbakwunye WordPress na WooCommerce iji tinye edemede gị na-enweghị ndezi ndebiri.
Njikọta Email Visitors - gbanwee onye ọbịa a na-amaghị aha ka ọ bụrụ onye ọbịa amaara ma ọ bụrụ na ị na-anakọta adreesị ozi-e site na mpempe akwụkwọ ọdịda gị ma ọ bụ ụdị ndebanye aha gị. Oribi nwere njirimara ịtọpụta adresị email nke ndị ọbịa ozugbo ha nyefere ya ka ị nwee ike ịmata ha ọfụma.
Ma ị na-azụ ahịa na-achọ ịchụpụkwu ụzọ site na weebụsaịtị gị, ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-achọ ịnye akụkọ na arụmọrụ ka mma maka ndị ahịa gị, ma ọ bụ saịtị ecommerce na-achọ ịbawanye ọnụego ntụgharị - Oriki nwere niile -aza, ị chọrọ.
Debanye aha maka Akaụntụ Oribi Free!
Ngosi: Abụ m mmekọ Oriki ma ị nwere ike iji koodu ego chukwuebuka maka mgbakwunye 5% ma ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta ndenye aha (nke akwadoro ya nke ukwuu)!
Tags: ihe omumaAnalyticsnyochaa arụmọrụ arụmọrụnsuso ihe omume enweghi kooduntughari foneelu nyochantughari funnelscross-channel njirimaraakụkọ omenalanchịkọta ecommerceomume mmekọrịtanjirimara ahia zuru okeGoogle Analyticsisiotu ndị ọbịaoghere dị mmanchịkọta woocommercenchịkọta WordPress